Avaradoha sy Besarety : nodiovina ny lakandrano hiatrehana ny orana | NewsMada
Avaradoha sy Besarety : nodiovina ny lakandrano hiatrehana ny orana
Nanatontosa fanadiovana lehibe ny eo anivon’ny boriborintany fahatelo ny faran’ny herinandro teo ho fitandroana ny fahadiovana ary hiarovana ny fiakaran’ny rano eny amin’ny faritra iva mandritra ny fotoam-pahavaratra.
Natomboka teny Avaradoha ary nifarana teny Besarety izany. Natao tamin’izany ny fanesorana ireo fako rehetra izay manentsina ny lakandrano. Teo koa ny fanesorana ireo mpivarotra tsy manara-dalàna mipetraka eny amin’ny lalan’ny mpandeha an-tongotra. Mpiasa 44 mianadahy avy ao amin’ny kaominina no nifarimbona nanao ny asa nandritra ny tapak’andro.
Araka ny hita, tsentsin’ny loto avokoa ireo lakandrano eny amin’iny faritra Avaradoha izay mihazo an’i Besarety iny ka mahatonga an’iny toerana iny ho dibo-dran rehefa avy ny orana.
Nandritra ny fidinana, tsy nitsahatra nanentana ireo mponina ny lefitry ny lehiben’ny boriborintany fahatelo miaraka amin’ny tompon’andraikitra eny an-toerana mba hitandro hatrany ny fahadiovana sy hanary ireo fako eny amin’ny dabam-pako.
Nambarany koa fa tsy hijanona hatreo izao hetsika izao fanadiovana izao fa mbola hisy ny manaraka. Hitohy eny amin’ny faritra Mahavoky sy Andravoahangy indray izany mba hisorohana ny fitohanan’ny rano.